कृषि पत्रपत्रिका Archives - krishipost.com
काठमाडौं । साग आफैंमा उपयोगी तरकारी हो । पकाएर र काँचै खान मिल्ने साग स्वादिलो पनि हुन्छ । त्यसमा पनि रायोको साग बहु उपयोगी हुन्छ । संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक छ...
२३ वर्षको रानी नामक गाईले २१ सेन्टिमिटरको बाछा लाई जन्म दीएको छ
काठमाडौँ । एउटा अनौठो पुड्के गाई सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । खबर हो बंगलादेशको । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार बंगलादेशको चरिग्रामस्थित एक फार्ममा भेटिएको उक्त गाई २१ सेन्टिमिटरको रहेको बताइएको छ । २८ केजी तौल रहेको उक्त गाईको लम्बाई २१ सेन्टिमिटरको रहेको छ ।...
सुनौलो अबसर : नेपालीहरु कृषि कामका लागि अमेरिका जान पाउने, यसरी भिसा लगाउनुहोस्
काठमाडौं। एउटा H-2A भिसाले अमेरिकी रोजगारदातालाई अमेरिकी कामदारहरू उपलब्ध नभएकाले अस्थायी कृषि श्रमिकका रुपमा विदेशी नागरिकहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा ल्याउने अनुमति दिन्छ। यदि तपाईँ कृषि श्रम वा अस्थायी जागिर वा मौसमी प्रकृतिका कृषि कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने H-2A गैर आप्रवासी वर्गको भिसा लागू हुन्छ...
एजेन्सी । नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ ।यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक खुराक मानिन्छ ।नेपालमा पाँच प्रजातिका बट्टाई पाइन्छन्। तीमध्ये ‘कमन क्वेल’ बट्टाई...
बजार मूल्यभन्दा प्रतिकेजी ४५० रुपैयाँ सस्तोमा खसीको मासु बिक्री
काठमाडौं । बजारमा खसीको मासु प्रतिकेजी १३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका बेलामा भाटभटेनी सुपरमार्केटले भने प्रतिकेजी ८५० रुपैयाँमै बिक्री गर्न थालेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले बजारमा बिचौलियाका कारण खसीको मासुको मूल्य महंगो भएको भन्दै आफूहरुले सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए...
नेपालमा बट्टाई पालन निकै फास्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ। यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक खुराक मानिन्छ। बट्टाई कुखुरा जस्तै खोरमा थुनेर पालिन्छ। एक वर्गमिटर ठाउँमा करिब ५०...
मुखमा एक केश्रा लसुन ३० मिनेटसम्म राख्दा हुन्छ यस्ताे फाइदा..
हामीले सामान्यतया खानामा मसलाको रुपमा लसुनलाई बढी प्रयोग गर्ने गर्छौं तर लसुनलाई प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईछ। लसुन हाम्रो शरिरको लागि अति उपयोगी मानिछ । तपाइलाई लसुनको बैज्ञानिक आधारमा के कस्ता फाईदा छन् यसका बारे जानकारी दिंदैछौ ।...
किम्बुको अङ्ग्रेजी नाम व्हाइट मलबेरी हो । यसले ट्युमर , मधुमेह जस्ता रोगहरुलाई निको पार्नुको साथै विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धि फाईदाहरु पुर्याउँदछ । धेरै बिरुवाहरु रोगलाई निको पार्ने गुण भएपनि औषधिको रुपमा चिनिदैंन । किनकी यसको प्रयोग धेरैजसो अरु औद्योगिक उद्येश्यको लागि मात्र गरिन्छ । यस्तै...
बेलबारीमा बाख्रा वितरणमा एक करोडको चलखेल : अस्ट्रेलियाको बाेयर भन्दै नवलपरासीका बाख्रा बाँडियो
विराटनगर, २५ जेठ । मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा बोयर जातको बाख्रा वितरणमा एक करोड रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको छ । अस्ट्रेलियाको बाेयर भन्दै पश्चिम नेपालबाट आयात गरिएका बोयर जातको बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्दा एक करोड रुपैयाँको चलखल भएको हो । नगरपालिकाले जेठ १५ गते...
यो झार चिन्नुभएको छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार कमाई ! कसरी कमाउने त?
काठमाडौ । जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा।लीले...